Richard Stallman: bebe kokoa amin'ny fametraham-pialany | Avy amin'ny Linux
Richard Stallman: bebe kokoa amin'ny fametraham-pialany
Isaac | | About us, hafa
Eny, ny vaovao momba ny Ny fialan'i Richard Stallman tamin'ny asany tao amin'ny MIT sy ny FSF Ataoko fa nahagaga ny rehetra izany. na dia Tsy nahalala ny raharaha Epstein aho, satria tsy dia matetika aho no manaraka TV na media hafa. Tsy fantatro mihitsy ny zava-nitranga ary te-hamorona lahatsoratra iray hanambara ny vaovao aho nefa tsy nandomando loatra satria tsy ampy ny angon-drakitra tokony holazaiko. Saingy ankehitriny, ny fanehoan-kevitra sasany (izay tiako) ary ny vaovao izay azoko nakarina momba an'io raharaha io dia nanome ahy fomba fijery tsara kokoa momba ilay raharaha.
Inona no nitranga efa fantatrao, fa handeha izahay izao ny fampahalalana fanampiny izay tsy fantatro, fa heveriko fa zava-dehibe ho famenon'ny lahatsoratro hafa mba hahafantaranao tsara kokoa ny zava-drehetra. Eto koa Avelako ny rohy amin'ilay lahatsoratra nangataka ny fametraham-pialana an'i Richard Stallman momba ny fiampangana azy noho ny mailaka navoakan'ny hevitra momba ny fiheverana fa ny rm tenany ihany momba ity raharaha ity. Azonao atao ny mahita ny loharano niavian'ireo fampahalalana izay nahatonga izany rehetra ...
Raha ny tokony ho izy dia naka mailaka anatiny avy tao amin'ny MIT izay nanehoan'i Richard Stallman ny heviny ilay zazavavy. Nilaza izy fa nangataka azy i Epstein nanao firaisana tamin'ny mpikambana MIT nodimandry tamin'ny 2016 (Marvin Minsky). Ary i Stallman dia ho avy hiaro an'i Minsky tamin'ny filazany fa ny mpiara-miasa aminy dia mbola tsy nanao firaisana tamin'ny tovovavy nahafantatra fa noterena izy. Ny vavolombelona iray izay teo an-toerana dia nanome toky fa nanantona ilay zazavavy, fa nolavin'i Marvin izy.
Ataovy mazava koa izany Tena notsaraina i Jeffrey Epstein, hita fa meloka ary voaheloka noho ny fanondranana olona an-tsokosoko, ary voamarika ho mpiremby ny firaisana. Tao amin'ny fonja nitoerany dia nanandrana namono tena imbetsaka izy. Ary toa azony ihany izany tamin'ny farany. Tamin'ny 10 Aogositra 2019, hita tao amin'ny sela ny fatiny ary ny zava-drehetra dia manondro famonoan-tena, na dia misy aza ny tsikombakomba sasany izay nanondro antony hafa ...
Marina izany ny fanambaràna sasany nataon'i Stallman nalaina avy tamin'ny teny manodidina dia mety hamitaka na hadika vilana. Ary mety izany no izy. Marina ihany koa fa nandritra ny tantara dia nanao i Stallman fanambarana momba ny firaisana ara-nofo izay lasa miova amin'ny fomba fahitany zavatra ary mamantatra rehefa diso izy. Raha fintinina, ao amin'ireto fanehoan-kevitra ireto dia nilaza izy fa:
Vonona hanao firaisana ny olona iray raha vantany vao mahatratra ny fahamatorana ara-nofo (fahamaotiana). Ary tsy misy maharatsy ny olona amin'ny taona fanaovana firaisana izay zaza tsy ampy taona manao firaisana amin'ny faneken'izy ireo amin'ny olon-dehibe. [Raha ny marina dia mitranga matetika eo amin'ny fiarahamonina izany]
Taorian'ny resadresaka nifanaovany dia tsapany fa tsy ny resaka ara-batana ihany no misy azy fa ao koa ny faritra ara-tsaina. Noho izany, diniho fa ny zaza tsy ampy taona (na dia efa matotra ara-nofo aza izy) dia manao firaisana amin'ny olon-dehibe satria mety hiteraka fahavoazana ara-tsaina ho an'ny zaza tsy ampy taona izany. [Tsy mankasitraka ny fanolanana na ny pedofilia na zavatra hafa toa izany izy]
Taty aoriana dia lasa lavitra izy ary nanaiky fa tsy mety raha zaza tsy ampy taona manao firaisana amin'ny olon-dehibe na amin'ny toe-javatra toy inona na toy inona. Na eo aza ny fanekenao.
1 Aiza ny lakile?
Aiza ny lakile?
Izany dia nilaza, Miverina amin'ny tantara lehibe sy ny fametraham-pialany aho an'ireo toerana noteren'ireo fanerena ireo. Manokana indrindra ho an'ireo mailaka voasakana izay nampiasaina hanohitra azy noho ny fanehoan-kevitra momba ny raharaha Epstein sy ny hafa. Ny voalaza tao amin'ireo mailaka ireo momba ilay tranga nolazaiko talohan'i Minsky dia:
«[…] Somary manjavozavo sy malama ilay teny hoe 'herisetra ara-nofo' […] nanolotra ny tenany tamin'i Minsky voaomana tanteraka izy.»Mamaly ny mailaky ny MIT ho an'ireo mpianatra sasany izay nangataka tamina tambajotra sosialy ho fihetsiketsehana iray hanohitra ny zava-nitranga. Fa raha marina fa misy ny vavolombelona nahita an'io ary nitranga toy izao dia mety ho marina i Stallman.
Ho an'ny ny raharaha mahatafiditra an'i Marvin Minsky izay nodimandry dia voampanga ho nanao herisetra ara-nofo tamin'ny iray tamin'ireo niharan'i Epstein. Ary ny teny hoe "herisetra ara-nofo" dia mahery loatra ho an'i Stallman, satria toa i Epstein tenany no noteren'ilay niharam-boina fa tsy i Minsky. Angamba ny zavatra maharikoriko eto dia ny mieritreritra fa ny olona terena dia mihevi-tena ho "vonona tanteraka" hanao zavatra iray, satria toa tsy noho ny fahareseny lahatra akory izany. Heveriko manokana fa eo daholo izany ny lakilen'ny tsy fahatakarana.
Stallman no nitsara azy fa tsy ny zava-misy. Izay mahalala ny tantaran'i Richard sy ny toetrany manokana dia afaka mahatakatra ny lalany. Voalaza fa manana Asperger's Syndrome izy, ary tsy ataoko fialan-tsiny izany. Saingy manokana manana toetra autisme spectrum aho ary mampihomehy indraindray ny mahatakatra zavatra sasany izay takatry ny hafa mora foana.
Na izany na tsy izany, eo an-tampon'ny sain'ny olona i Stallman ankehitriny ary manao lohateny lehibe ho an'ny fanambarana vitsivitsy. Te hanazava azy tsara indray aho. Ao amin'ny tsy nisy tranga nahavita izany heloka izany (Ny heviny ihany no nomeny), hoy aho tamin'ny lahatsoratra voalohany ary averiko eto ihany ... Izany no antony nahatonga azy hanaiky fa io korontana io dia vokatry ny «andiam-tsy fahazoan-kevitra sy famaritana diso".
Tsy milaza an'ity ho an'ity tranga ity aho, na ho an'izay manokana manokana. Mihevitra ny tenako ho vehivavy aho, saingy azafady, miantso ny tenany ho feminisista ny vehivavy sasany ary tena manimba zavatra betsaka amin'ny vehivavy marina tokoa izy ireo. Ny fitiavan'ny vehivavy tena izy dia iray izay maniry ny fitovian'ny lahy sy ny vavy fa tsy ny fanamafisana ny vehivavy ho an'ny lehilahy. Izany no izy "Hembrismo" na "misandría" ary tsy tokony hafangaro amin'ny maha-vehivavy azy, satria tsy izany. Ary azafady, aza mampiasa ny teny hoe feminazi koa.
Mikasika ny olana ara-pananahana dia tiako ny hanazava fa mandinika aho fanolanana ho iray amin'ireo heloka lehibe indrindra azo atao izany, miaraka amin'ny famonoana olona. Saingy misy zavatra maharikoriko ihany fa ny olona nanao azy dia tsy voaheloka ary mandoa izany, ary izany dia ny olona tsy nanao izany ary tsy manan-tsiny dia voaheloka amin'izany ... Averiko indray, tsy miresaka tranga manokana aho, Toa matotra izany amiko.
Fampahalalana bebe kokoa sy fampahalalana momba an'ity lohahevitra ity, hahafahanao mamorona ny fehin-kevitrao manokana (Amin'ny teny anglisy izy io, nefa ilaina ny mamaky azy, na dia nadika aza raha tsy mahay teny anglisy ianao, satria misy fampahalalana tena mahaliana, indrindra ny lahatsoratra faharoa):
Momba ny fitarihan'i Richard Stallman ny FSF.
Fieken-keloka ho an'ny programmer iray izay niara-niasa nandritra ny fotoana ela niaraka tamin'i Richard Stallman.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Richard Stallman: bebe kokoa amin'ny fametraham-pialany
Tsy dia haiko loatra ny tantara ... Nandeha tamin'ny lahateniny ho an'ny GNU aho ary mahamenatra ny fiafaran'ny tantara.
Ary izany rehetra izany ho an'ny moralista sasany te-hanao tabataba sy hanao dokambarotra ny tenany, miaraka amin'ilay hatsikana fanampiny fa ao amin'ny fiarahamonina manome azy ireo fahalalahana maneho hevitra! Mampalahelo fa nametra-pialana izy, amin'ireto tranga ireto dia tiako kokoa ny fahaizan'i Torvalds, nalefany izy ireo haka rivotra ary hijanona ho tena madio.
Mino marina aho fa tsy misy lohahevitra bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity. Ary na dia miantso ny tenany ho "feminista" aza ny mpanoratra dia heveriko fa tokony hieritreritra an'izany izy. RMS an-tsitrapo sy mavitrika (tsy nisy nanontany) dia nanapa-kevitra ny hanohana olona nanao firaisana tamin'ny olona iharan'ny fanondranana olona an-tsokosoko. Ary raha tokony hangina na tsy hanontany momba ny kinovan'ny octogenarianina voalaza etsy ambony, dia nanapa-kevitra ny hanontany ny ampahany marefo indrindra izy. Ary ity dia ampahany amin'ny tantaran'ny fihetsika manambany ny kolontsaina vehivavy.
Ary Andriamanitra, ny fitiavan'ny vehivavy (ilay lazain'ny mpanoratra fa tsy ilay "tena izy", toy ny hoe nanana fahefana hanapa-kevitra hoe iza no tena izy) dia mitady fitoviana eo amin'ny rehetra nefa hita fa tena izy tsy misy ary miseho ankamaroan'ny faritra. Toa ny teknolojia ary na ny hetsika "rindrambaiko maimaimpoana" aza (toa izany koa amin'ny toe-javatra mafana fo hafa).
Valiny tamin'i Marcel
1-Aza miampanga ary aza manome porofo. Lazao amiko izay lohahevitra hitanao.
2-Vehivavy aho, tsy mila mieritreritra an'izany. Saingy misy ny hafa izay manambotra ny tenany ao anatin'ny feminisma mba hamotehana ny fitiavan'ny vehivavy.
Ohatra, ireo izay mametraka foto-kevitra politika ao aminy, satria tsy an'ny havia na havanana io, fa an'ny tsirairay.
Ny hevitry ny 3-RMS dia nandeha tany amin'ny lisitry ny mailaka ary olona manandrana manao ny marina izy. Nametra-panontaniana fotsiny izy ny amin'ny fampiasana ny teny hoe "assault" fa tsy ilay fihetsika. Azoko tsara fa ny filazàna hoe herisetra dia toy ny hoe nandodona ilay niharam-boina i Mevin, ary toa efa noterena hanao izany ilay niharam-boina. Tsy mbola tany aho ary tsy ampy ny angon-drakitra ka tsy afaka miteny betsaka intsony.
4-toe-tsaina manambany? RMS amin'ny sehatra ara-tsosialy dia tsy ny tsara indrindra, ary tsy toy izany koa Torvalds (jereo CoC, ary fanampiana voaray). Tsy mahay izany aho. Fa farafaharatsiny mba miezaka manao ny rariny araka izay azo atao aho. Ary tsy afaka mitifitra olona ianao ary manontany tena raha tsy manan-tsiny izy ireo. Amin'ity tranga ity dia nanome ny heviny irery i RMS. Ary raha nanana, ohatra, avy any Epstein aho, dia tsy hankasitraka ny RMS aho. Saingy tsy izany no izy.
5-Manana fahefana mitovy aminao aho hilazalazana ny vehivavy. Tsy misy ny fitoviana, izany no mahatonga ny vehivavy. Miharihary izany. ary? Amin'ny fotoana inona no nanoratako raha tsy izany?
Azafady, manontany ny ambin'ireo fanehoan-kevitra amin'ny ho avy aho raha ilaina ny mitsikera ny zavatra nosoratako (raha marina izy ireo dia ekeko izany), fa tsy ity karazana fanehoan-kevitra ity tsy misy fototra ary mitsara ahy nefa tsy fantatro akory, ireo tetikasa ananako manodidina ny vehivavy. (sy ny fampidirana ny vehivavy amin'ny STEM), na ny fihetsiko… Misaotra.
1- Lehilahy miaro ny lehilahy izay manamafy ny fanondranana olona an-tsokosoko sy ny fiheverana ny lahy sy ny vavy hafa, manao katalaogy ho "hembristas" na "feminazis" (eny, fantatro fa tsy nanao izany ianareo tamin'ireto farany) vehivavy izay miaro ny zon'izy ireo amin'ny fomba tsy mahazo aina ho an'ny lehilahy. izay mampahory azy ireo ...
2- politika ny feminisma. Ahoana ny lozisialy maimaim-poana, veganism, ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro na fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny homophobia. Politika daholo ny zava-drehetra, ka ny fanesorana azy amin'ny maha-vehivavy azy dia tsy ilay zavatra "feminista" faran'izay betsaka. Ary raha ampiarahiko amin'ny teboka faha-5, angamba manana fahefana mitovy aminao sy izaho hamaritana azy. Fa iza no tena manana fahefana hamaritra izany dia ireo mpiorina amin'ny tolona: ny vehivavy. Tsy izahay.
3- "Ny hevitr'i RMS dia nandeha tany amin'ny lisitra mailaka ary olona miezaka ny hanao ny marina izy." Tsy haiko izay ezahiny hatao na tsia, ny fihetsiny ihany no omeko lanja. Ary raha ny fahitako azy, ny fandefasana taratasy (izay tsy nisy nangatahin'olona) mba hilaza fa ny teny hoe "nanafika" dia teny tsy mendrika ho an'ny sakaizany dia fikasana hamelombelona sy hanamaivana ny zavatra nataony. Ary tena matotra izany.
4- Zavatra maro: Tsy nitsara ny fitsaranao aho rehefa nifampiraharaha tamin'ny namanao. Mikasika ny RMS kosa, nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'izy ireo fa tsy tadidin'izy ireo fa misy vehivavy liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny FSF (mazava ho azy fa nisy vehivavy nanao izany tamin'ny fotoana nanaovana dinika) na teo am-baravarankely «[…] Ny "tovovavy mamoa fady" dia fihetsika manambany vehivavy. Ny zavatra tsaraina dia ny fomba fiasan'ireo fihetsika ireo amin'ny vehivavy mivondrona eo amin'ny tontolon'ny teknolojia. Misy vokany ny fanehoan-kevitra sy hevitra ary noho izany dia zava-dehibe.
Nomeko ny hevitro mifototra amin'ny lahatsoratra nosoratanao ary ny adihevitra nomeko dia mifototra amin'izany. Mazava ho azy fa tsy mahalala bebe kokoa momba ny fiainanao aho.
Ny fandehanana amin'ny fampahafantarana ka hatramin'ny hanomezana hevitra dia mamela diso an'ity lahatsoratra ity ary, ny fanehoan-kevitra momba ny olana iray ivelan'ny lohahevitra lehibe eo anelanelan'ny tratra, dia mampihena ny maha-matihanina an'ity tranonkala ity Mampalahelo izany.
Mamely tratra ????
Araka ny filazanao, tsara kokoa ity karazana lohateny ity, sa?:
Miara-miasa izahay amin'ny famoronana tontolo iray hanjavona amin'ny fahalalahana maneho hevitra, ary toerana misy ny hevitra ampy hanentanana olona iray amin'ny fitsarana. Heveriko fa tsy rariny ...
Isaka, mitsoka ny tratra noho ny ady hevitra. Ny mpanonta dia mpanonta ary mino aho fa tsy ilaina ny miaro na manamarina azy; ny fanehoan-kevitra dia efa mariky ny faharesena.
Niezaka ny hanao hevitra mahasoa izy. Na manaiky na tsia amin'ilay atiny ianao, dia mankasitraka hatrany ny fotoana sy ny ezaka ataonao.
Ng13 dia hoy izy:
Azo iadian-kevitra fa nanambara ny tenany ho "feminista" ny mpanoratra.
Mamela ampahan'ny lahatsoratra mahaliana momba an'io lohahevitra io aho.
“Aleo koa tadidintsika fa tsy i Stallman ihany no nivoaka niaro ny talen'ny MIT, Joishi Ito. Lehilahy malaza hafa koa avy amin'ny tontolon'ny kolontsaina toa an'i Lessig sy Negroponte no nahavita izany. Ampy izany fihetsika andian'olom-belona miaro ny lehilahy izany amin'ny maha lehilahy azy. Tsy misy "haza mpamosavy" avy amin'ny hetsiky ny vehivavy.
Ny vehivavy dia iharan'ny fanitsakitsahana amin'ny sehatra rehetra ataon'ny lehilahy izay mampiasa ny heriny sy manararaotra ny toerany: amin'ny sinema, amin'ny opera ary koa eo amin'ny sehatry ny haitao sy ny hetsika ara-tsosialy. Ary izahay lehilahy dia manohy tapa-kevitra ny tsy hiraharaha izany satria tsy isika no iharan'ny herisetra fa izay mampihatra izany. "
Valiny ho an'i Ng13
Tena marefo ny olana, saingy tsara ny fanentanana ny fahasimbana aterak'izany ... indrisy fa maharary ity fanovana paradigma ity ary na kely aza ny fandraisanareo anjara dia tonga ny fotoana tokony hiarahan'ny tsirairay. Ny olana hitantsika eto dia mafana be ny ovy hany ka afaka mandoro izay manatona azy. Manantena aho fa ny zava-drehetra dia mandeha amin'ny fomba tsara indrindra ho an'Andriamatoa Stallman. ary i Isaka dia tsy mandray am-po ireo hevitra nataonay, ianao no tonian-dahatsoratra eto ary raha mamaky ireo lahatsoratra izahay dia satria heverinay fa fitaovana fampahalalana tsara izany. Misaotra betsaka amin'ny asa ataonareo.
Eny, tsara kokoa ny mamela ny foto-kevitra mandra-pahatongan'ny angon-drakitra maro sy hahalala ny fiafaran'ny zavatra rehetra.
Gnome 3.34 misy, fantaro izay vaovao ao amin'ny kinova vaovao